Umphakathi ukhala ngamaphoyisa | News24
Umphakathi ukhala ngamaphoyisa
Isithombe: SithunyelweIncwadi ebhalwe umphathi siteshi wase Plessislaer ephendula uhlu lwezikhalo zomphakathi wasEsigodini nasEmgodini.
AMANYE amalungu omphakathi wasEsigodini nasEmgodini asola amaphoyisa ase Plessislaer ngokuwahlukumeza ngokuwashaya engenze lutho.
Elinye ilungu lo mphakathi elicele ukuthi igama lalo lingadalulwa lithe: “Sihleli kanzima, zinsuku zonke amaphoyisa amisa amalungu omphakathi awatshele ukuthi awalale phansi, awaseshe bese eyawashaya kodwa kungekho onecala,” kusho leli lungu lo mphakathi.
Uthe amanye amaphoyisa okusolwa ukuthi ahlukumeza umphakathi ahamba ngemoto yamaphoyisa ase Port Shepstone kanti esinye isigameko sokushaywa kwamalungu omphakathi angenzanga lutho senzeke ngoLwesihlanu oledlule esitolo esisendaweni yakwaPata.
“Abantu baphinde beshaywe nangezidunu zezibhamu, akekho umuntu osathemba amaphoyisa kulendawo. Asisazi ukuthi kumele senze njani ngoba siyasaba nokuvula amacala ngoba lokho kungaphetha ngokuthi ovule icala athole ukuhlukumezeka futhi,” kusho leli lungu lo mphakathi.
Omunye umthombo utshele leli phephandaba ukuthi ubeyingxenye yalabo abashaywe amaphoyisa ngoLwesihlanu oledlule kwesezinye izitolo ezikulendawo.
“Amaphoyisa afika ngezikhathi eziphakathi kuka-7.30pm kuya ku-8pm asitshela ukuthi asilale phansi, asibuza amagama ethu abe esishaya, emuva kwalokho abaleka,” kusho lo mthombo.
Uthe lamaphoyisa abe hamba ngemoto yamaphoyisa ase Plessislaer kanye neyase Port Shepstone kanti abengawugqokile umfaniswano wamaphoyisa.
Ngokusho kwalomthombo esinye isigameko salolu hlobo senzeke ngoMgqibelo odlule endaweni yas’ Okhalweni.
Lamalungu omphakathi aqhube ngokuthi umphakathi wakulendawo uphinde ubhekane nenkinga yamatekisi njengoba amatekisi engasasebenzeli Esigodini nasEmgodini.
Bathe ngoLwesine oledlule bekumele uNgqongqoshe wezokuThutha KwaZulu-Natal uMnu. Mxolisi Kaunda ahlangane nomphakathi wakulendawo ukuzokwethula izimpendulo njengoba lo mphakathi wabhikisha mhlaziyi 6 ku-Okthoba ukhala ngodaba lwamatekisi.
“Kodwa wagcina engafikanga waphelela esiteshini samaphoyisa,” kusho oyedwa wabo.
Omunye uthe indlela amaphoyisa enza ngayo ngokuhlukumeza abantu abangenzanga lutho umphakathi usunezinsolo zokuthi amaphoyisa acheme nabemboni yamatekisi.
Uqhube ngokuthi umphathi wesiteshi samaphoyisa ase Plessislaer uphendule uhlu lwezikhalo zomphakathi mayelana nodaba lwamatekisi ngokuthi izinto ezithinta ukusebenza kwamatekisi kumele zibhekwe uMnyango wezokuThutha.
Okhulumela amaphoyisa ase Plessislaer, uKaputeni Musa Ntombela uthe akukho okungaphawulwa amaphoyisa ngodaba lokuthi amaphoyisa ahlukumeza amalungu omphakathi njengoba kungekho icala elike lavulwa livulelwa amaphoyisa ngalezi zinsolo.
“Kodwa amalungu omphakathi kumele akwazi ukuthi analo ilungelo lokuvulela amaphoyisa amacala futhi siyawaqguqguzela ukuthi akwenze lokho,” kusho uKaputeni Ntombela.
Uphethe ngokuthi amaphoyisa akhishwe ngobuningi awo ukuthi eziqapha isimo Esigodini nasEmgodini.